China COVID-19 (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) mpamokatra sy mpamatsy | Realy
Fahasalamana ho an'ny vehivavy
Metabolisma amin'ny taolana
2019-nCOV IgGIgM Fitsapana haingana ...
COVID-19 (SARS-Cov-2) Cassette Test Antigen Rapid (swab)
COVID-19 dia aretina miteraka areti-mifindra mahery vaika. Mora tohina ny olona amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ireo marary voan'ny virus coronavirus no loharanon'ny aretina; ny olona voan'ny asymptomatika koa dia mety ho loharanom-aretina. Miorina amin'ny fanadihadiana momba ny epidemiolojika ankehitriny, ny vanim-potoana fanamoriana dia 1 ka hatramin'ny 14 andro, ny ankamaroany dia 3 ka hatramin'ny 7 andro. Ny tena fisehoana dia ny tazo, havizanana ary kohaka maina. Ny fitohanana eo amin'ny orona, ny orona, ny tenda, ny myalgia ary ny fivalanana dia hita amina tranga vitsivitsy.
TORO LALAN'NY】 【
Ny Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) dia famonoana membrane immunochromatographic izay mampiasa antibodies monoclonal mora tohina amin'ny Novel coroinavirus.
Ny fitaovana fitsapana dia misy ireto fizarana telo manaraka ireto, dia ny santionany pad, pad reagent ary ny membrane reaction. Ny sisiny iray manontolo dia raikitra ao anaty fitaovana plastika. Ny membrane reagent dia misy ny kôlôlidialy-volamena mifangaro miaraka amin'ny antibodi monoclonal manohitra ny Novel coroinavirus; ny membrane reaction dia misy ny antibodies faharoa ho an'ny Novel coroinavirus, ary ireo antibodiôla polyclonal manohitra ny globulin-totozy, izay voarindra mialoha amin'ilay fonosana.
Rehefa ampidirina ao amin'ny varavarankely santionany ny santionany, dia simba ireo conjugates maina ao amin'ilay pad reagent ary mifindra monina miaraka amin'ilay santionany. Raha misy ny coroinavirus Novel dia misy santionany mifototra amin'ny conjugate anti- Novel coroinavirus sy ny virus dia ho tratry ny monoclonal anti-Novel coroinavirus voafono ao amin'ny faritra T.
Na misy ny virus na tsia ilay santionany, dia mitohy ny fifindra-monina ny vahaolana mba hihaona amin'ny reagent iray hafa (antibody IgG anti-mouse) izay mamatotra ireo mpampifandray sisa, ka mamokatra tsipika mena eo amin'ny faritra C.
Ny membrane reagent dia misy ny kôlôlidialy-volamena mifangaro miaraka amin'ny antibodi monoclonal manohitra an'i Novel coroinavirus; ny membrane fanehoan-kevitra dia misy ny antibodies faharoa ho an'ny Novel coroinavirus, ary ireo antibodies polyclonal manohitra ny totozy globulin, izay voarindra mialoha amin'ny membrane.
【Fitehirizana sy fitoniana】
Tehirizo ao amin'ny hafanan'ny efitrano na amin'ny vata fampangatsiahana (2-30 ° C) ny Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab). Aza mangatsiaka. Ny reagents rehetra dia miorim-paka mandra-pahatapitry ny daty lany daty amin'ny fonosana ivelany sy ny lovia famafazana.
【FANAMBARANA SY FANOMANANA MANOKANA】
1. Fanangonana karazana:
Izy io dia azo ampiharina amin'ny famaritana ny coroinavirus Novel avy amin'ny santionan'ny swab Nasopharyngeal. Ampiasao ireo santionany voaangona vao haingana ho an'ny fahombiazan'ny fitsapana tsara indrindra. Ny fanangonana santionany tsy ampy na ny fikirakirana santionany tsy mety dia mety hitondra valiny ratsy-diso.
Ho an'ny swab nasopharyngeal ampidiro tanteraka ao anaty kitapo nasal ilay swab sterilized omena ato amin'ity kitapo ity, ary esory imbetsaka mba hanangonana ireo sela epidermaly ao amin'ny tsiranoka.
Ho an'ny swab oropharyngeal ampidiro tanteraka ilay swab sterilized azo omena ao amin'ity kitapo ity ao amin'ny pharynx any aoriana, ny tonsils ary ny faritra hafa mirehitra. Aza mikasika ny swab, ny takolaka ary ny nify amin'ny swab.
Manolo-kevitra ny hanangona santionany avy amin'ny Nasopharyngeal hahazoana valiny marina kokoa.
2. Fanomanana karazana:
1) Makà Buffer Extraction Sample 1 tavoahangy, esory ny satrony tavoahangy, ampio ao anaty fantsona fitrandrahana ireo buffer fitrandrahana rehetra.
2) Swabbing Nasopharyngeal sy oropharyngeal
Ampidiro ao anaty fantsona fitrandrahana izay misy Sampel Extraction Buffer ny swab. Ahodina ny swab ao anaty fantsona amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana boribory hanakodia ny sisin'ny fantsona fitrandrahana mba hanehoana ny ranon-javatra ary averina indray avy eo amin'ilay savony, esory ny fehikibo. Ny vahaolana nalaina dia hampiasaina ho santionany andrana.
【Ireo mpiorina amin'ny kitapom-pitsapana】
· Fitaovana fitsapana
· Ampidiro fonosana
· Bokotra misy sivana
· Tube fitrandrahana
· Buffer fakana santionany
【Toro lalana hampiasaina】
Avelao ny fitsapana, ny santionany, ny buffer fitrandrahana hifanaraka amin'ny mari-pana (15-30 ° C) alohan'ny fitsapana.
1.esory ny fitaovana fanandramana amin'ny paosy foil voaisy tombo-kase ary ampiasao haingana araka izay tratra. Apetraho amin'ny faritra madio sy madio ny fitaovana fanandramana. Ny valiny tsara indrindra dia ho azo raha atao ny fitsapana avy hatrany aorian'ny fanokafana ilay paosy foil.
2. esory ny satrok'ilay fantsom-panangonana,
3. Avoahy ny tavoahangy 1 an'ny santionany Buffer, esory ny satrony tavoahangy, ampio ao anaty fantsona fitrandrahana ireo buffer fitrandrahana rehetra.
4. Ataovy ao anaty buffer fitrandrahana santionany ny santionany swab sterilized. Ahodina ny swab mandritra ny 10 segondra eo ho eo raha manindry ny lohan'ny fantsona ny lohany mba hamotsorana ny antigen ao anaty savony.
5. Esory ny swab voadio ary apetaho amin'ny lohan'ny Buffer ny lohan'ny swab sterilized rehefa esorinao izy mba handroahana ranon-javatra betsaka araka izay azo atao amin'ny swab. Ario ny swab sterilized mifanaraka amin'ny protokolanao fanariana fako biohazard.
6. Kitiho ary hamafiso ny satrony amin'ny fantsom-panangonana santionany, avy eo ahintsano mafy ilay fantsom-panangonana ohatra mba hampifangaro ilay santionany sy ilay fitrandrahana fitrandrahana. Jereo ny sary 4.
7.Ampio ranona 3 ny vahaolana (eo ho eo amin'ny 80ul) amin'ny santionany ary avy eo atombohy ny famerenana. Vakio ny valiny amin'ny 10 ~ 20 minitra. Aza adika ny valiny aorian'ny 20 minitra.
● Karazan-javamaniry: swab nasopharyngeal / swab oropharyngeal
● Fotoana fitsapana: 10-20 minitra
● fahatsapana: 96,17%
● Famaritana manokana: ＞ 99,9%
Previous: COVID-19 (SARS-Cov-2) Antibody IgG / IgM fitaovana fitsapana haingana
Manaraka: Fitsapana haingana an'i Adenovirus
Fitsapana haingana HBsAg / HCV
Fitsapana haingana HBV
Fitsapana haingana an'i Adenovirus
Entamoba Histolytica Rapid Test Cassette
Kasety fitsapana haingana an'ny Cryptosporidium Antigen
Fitsapana haingana HAV
TipsVokatra mafanaSitemapAMP Mobile
Momba an'i Realytech